Amanqaku kaChad Crowe malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UChad Crowe
UChad Crowe wajoyina Techwood Ukubonisana ngo-2016 njengenxalenye yokudibana. Okwangoku, ulawula ukuphunyezwa kweTechwood kunye nolawulo lweakhawunti. Uphethe isidanga se-bachelor kwiDyunivesithi yaseRinhardt kunye neMasters kwiDyunivesithi yaseTroy yoNxibelelwano. Kule minyaka, iChad ilawule ngaphezulu kwe- $ 25 yezigidi zeedola kwintengiso yokukhangela ehlawulelweyo.
Ingcebiso ngeTechwood yasekwa ngonyaka ka-2008 kwaye yindawo yokubonisana edigital elite enobuchule obuphambili kuphando lwezinto eziphilayo kunye nokuhlawulwa. Ilungu le-Inc5000 le-2017, elikomkhulu e-Atlanta, GA, kunye neqela le-17 elixhasa abathengi abangama-60, iTechwood inedumela lokuphunyezwa komgangatho ngaphakathi kwe-SEO kunye ne-PPC kwimicimbi yemicimbi.